Yiyiphi i-Amazon eyithengisa phambili yokuthengisa?
I-Amazon yiyona ndawo enkulu yokubuyisela i-intanethi kwi-intanethi apho iphepha ngalinye lomkhiqizo linesimo sayo kwiphepha lemiphumo yophando. I-Amazon isebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokulungiswa kwendlela yokujonga ukuba kutheni le nto okanye loo mveliso ifakwe kwiphepha elithile lokukhangela. Enye yezona zinto ziyaziwa kakhulu ngama-Amazon asetyenziso lwe-algorithms isithengiso sokuthengisa (iRaffers Rank).
Kule nqaku, siza kuxubusha indlela i-Amazon yokuthengisa iRafa isebenza ngayo. Kuya kukunika ithuba lokwakha umkhankaso wokuthengisa ngokufanelekileyo kwaye uphumelele abakhuphiswano bakho.
Ngaphambi kokuba siqhube kwi-core ye-Amazon engcono kakhulu yokuthengisa, ndingathanda ukuphawula ukuba i-Amazon ayibonakalisi imfihlelo ukuba i-Bestsellers Rank ibalwa kanjani. Yingakho zonke iinkcukacha ezinikezelwe kule post emfutshane zisekelwe kuphando lwam namava.
I-Amazon ithengisa njani umsebenzi wokubeka isikhundla?
Xa upheqa phantsi kwekhasi lomkhiqizo we-Amazon, ungayibona inqaku "leNkcazo yeMveliso". Eli candelo libonisa i-Amazon Bestsellers Rank. Eli nqanaba lihlaziywa ngeyure nganye kwaye lidibaniswa nenani lentengiso yentsholongwane, ngokumalunga neminye imikhiqizo ngaphakathi kweli candelo. I-Amazon Bestsellers Rank ikwaqwalasela idatha yeentengiso zembali kunye neendlela ezahlukeneyo zokuziphatha.
Ngokuqhelekileyo, isigaba sokuqala sithetha ukuba umkhiqizo usanda kuthengisa ngaphezu komnye umkhiqizo kwinqanaba elithile.
Kuyinto engafanelekanga ukuba i-Amazon ethengisa indawo isekelwe kwimveliso, kodwa kwinani kunye nomgangatho wokuhlolwa okanye ukulinganisa. Enyanisweni, kuthatha ingqalelo ukuthengisa kuphela (okwangoku kunye nangoko kutshanje). Yingakho kungenangqiqo ukuvelisa amanqaku amaninzi okanye okuhlawulelwayo ngokukhawuleza kwiphepha lemveliso yakho, ngokukodwa emva kwe-Amazon yokugqibela i-algorithm yokuhlaziya ngokubhekiselele kuyo yonke into engabonakaliyo ekufunyenwe ngayo imiyalezo kufuneka ikhutshwe ngokukhawuleza. Ngoko, sinokuthi i-Amazon Bestsellers Rank ibonisa indlela ethile imveliso esithengiswa ngayo ngoku nje xa kuthelekiswa nezinye iimveliso ngaphakathi kwinqanaba elifanayo.
Enye intsomi eqhelekileyo esiya kuyichitha kukuba imveliso ayinayo igalelo ngokukhawuleza kwinqanaba lokuthengisa. Njengoko ndathetha ngaphambili, i-Amazon ihlaziya izilungiso zayo ngeeyure. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kungathatha ixesha elongezelelweyo phakathi kokunyuka kweentengiso kunye nokuphuculwa kwendawo. Njengomthetho, eli xesha alikho iiyure ezingama-3. Yonke into ebalwayo yile nombolo yokuthengisa ehambelana neminye imikhiqizo kwicandelo elinye.
Ngaphezu koko, kukufanelekile ukukhankanya ukuba ukwanda kweentengiso akuthethi ukuba kuphuculwe indawo. Ingaba mhlawumbi enye yeengxaki eziphambene neengxaki zeAzambique. Amaxabiso athengisa ama-Amazon ngokuxhomekeke kunamanye imikhiqizo ngaphakathi kwinqanaba. Kuthetha ukuba ukwanda kwentengiso yodwa akunakwaneleyo ukuphucula izikhundla zakho. Ukwanda kwenyuka kwinani lezentengiso kunokukuzisa iRafforder Rank. Kufuneka uthengise ngaphezu kwamanye abathengisi kwicandelo lakho. Ngoko, ukuba ubona ukunyuka kweentengiso ngaphakathi kwendawo yakho kunye nemfuno ephezulu yemveliso yakho, akuthethi ukuba ungumthengisi ongcono kakhulu kwicandelo lakho. Ingabonisa kwakhona ukuba abanye abakhuphiswano bakho baqala ukuthengisa ngaphezulu.